Kooxda Barcelona oo guul wax ku ool ah ka gaartay dhigeeda Kooxda Real Sociedad +Sawiro – Gool FM
( Spain) 20 Abriil 2019 Kooxda Barcelona ayaa guul daro 2-1 dhabarka u saarisay Kooxda Real Sociedad kulan ka tirsan horyaalka Spain ee La Liga.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad kooxda Barcelona ayaa gool waqti dambe ah la timid wallow Kooxda Real Sociedad ay dhankooda soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan.
Daafaca reer Farance ee Lenglet ayaa dhaliyey goolka ay la hor martay Kooxda Barcelona daqiiqadii 45-aad ee ciyaarta kaddib caawin uu ka helay isla xidiga ay dhalasho wadaaga ay yihiin Ousmane Dembele.
Qeebtii koowaad ee kulanka ayaa lagu kala maray Barca oo gool ku hogaamineysa ciyaarta muddo kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta oo aheyd mid ka xiiso badan qeebtii koowaad.
Kooxda Sociedad oo soo karaar qaadatay waqtigii nasiinada lagu maqnaa ciyaarta ayaa durba la timid goolka bar-baraha ee ciyaarta waxaana goolkaas u dhaliyey Juanmi kaddib caawin uu ka helay Merino daqiiqadii 62-aad ee ciyaarta.
Barcelona cabsi badan kuma aysan abuurin goolka laga bareejeeyey iyaga oona durba kaga jawaabay in ay la yimaadaan goolka labaad ee ciyaarta kaas oo uu dhaliyey Alba kaddib caawin uu ka helay mucjisada kubada cagta ee Messi daqiiqadii 64-aad ee ciyaarta, natiijada kulanka ayaana isku rogtay 2-1.
Messi ayaa sameeyey caawintiisii 13-aad, mana jiro xidig ka caawin iyo goolal badan horyaalka sidoo kale waxa uu dhaliyey 33-gool taas oo l micno ah in uu ku lug yeeshay 46-gool.
Ugu dambeen kulan ciyaareedkii labada koox ee Barcelona iyo Real Sociedad ayaa ku soo idlaaday 2-1 oo ay ku guuleysatay Kooxda Barcelona.